Beledwayne: 2700 qoys oo ka soo cararay colaado oo ku biiray barakacayaasha - Radio Ergo
Beledwayne: 2700 qoys oo ka soo cararay colaado oo ku biiray barakacayaasha
Inta la xaqiijiyey 2700 oo qoys oo ka soo cararay colaado la sheegay in ay ka jiraan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa ku biiray xeryaha dadka baracay ee magaalada Beledwayne.
Khadiijo Macallin Xuseen oo ah hooyo ka mid ah dadka soo barakacay, ayaa Radio Ergo u sheegtay inay ka soo barakacday deegaanka Ceel-dheer oo 60 KM galbeed ka xiga magaalada Beledwayne, “Waxaa nahay 45 qoys oo ka soo qaxay Ceel-dheer kadib markii dagaal uu ka dhacay deegaanka oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa AMISOM iyo Al-shabaab isla markaana la gubay 15 guri dadna lagu laayey tuulada ayaan ku qasbanaannay in aan ka soo baxsanno inta xaalku nagu xumaan, waan soo lugeynay oo dadkii socodka awoodi waayay waddada ayaan uga soo tagnay maaddaama baabuur uusan soo galayn meelaha dagaalladu ay ka socdaan.’’ Ayay tiri.
Sidoo kale Aadan Macallin Madeer oo ah aabbe leh 6 carruur ah kana soo barakacay tuulada- Buq-aqable oo Beledwayne ka xigta galbeed, ayaa sheegay in xoolihi iyo guryihii ay uga soo carareen colaadaha haddana ay ku biireen dadka barakacay ee ku jira xeyaha Buunda-wayne iyo Hawlwdaag ee magaalada Beledwayne, ayna meesha ku haysto duruufo nololeed sida cunno la’aan iyo hoy la’aan balse halkan ay u yimaadeen inay helaan nabadgalyo.
Cabdi Cabdulle Waasuge oo ka mid ah odayaasha deegaanka dadkan soo barakacyna soo dhowaynayey ayaa Ergo u sheegay in dadkan ay ka soo kala qaxeen degaannada kala ah Ceel-dheer, Buq-aqable, Caad-xoog, Ceel-Cali, Buq-koosaar iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan, wuxuuna intaa ku daray in dadkan ay u baahan yihiin caawimaad maaddaama noolashoodu ay ku tiirsanayd xoolo iyo beero , isagoo ganacsatada ugu baaqay inay caawiyaan qoysaskan.
Guddoomiyaha degmada Beledwayne Maxamed Macallin Qalaafow ayaa xaqiijiyey in 2700 oo qoys ay soo gaareen Beledweyne walina ay kuwo kale soo socdaan, kuwaasoo ka soo baxsanaya dagaallada ka soo cusboonaaday degaannadooda, waxayna u baahan yihiin caawimaad deg deg ah gaar ahaan cunto, hoy iyo daawo.
Mohamed Osmaan Makaran/FO
Qoysas ka barakacay Baardheere oo gaaray Ceelwaaq
Qaxootigii Yemen ka yimid oo fursado shaqo ka helaya Boosaaso